Safiirka Ruushka u fadhiyay gudaha Turkiga oo la toogtay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldSafiirka Ruushka u fadhiyay gudaha Turkiga oo la toogtay
December 19, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Sawirka waxaa ka muuqda ninka safiirka dilay oo daba taagan inta uusan dilin [Sawirka: Twitter]
Ankara-(Puntland Mirror) Safiirka Ruushka u fadhiyay gudaha Turkiga ayaa lagu dilay weerar qori loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha caasimada Turkiga ee Ankara, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibada Ruushka.
Andrey Karlov oo ahaa safiirka Ruushka ee Turkiga ayaa khudbad jeedinayay marka laga toogtay gadaal dhowr jeer galabta oo Isniin ah, sida ay ku warameen warbaahinata Turkiga.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibada ee dalka Ruushka, Maria Zakharova ayaa dhimashada Andrey Karlov ka sheegtay bayaan laga sii daayay taleefishinka.
Ninka weerarka geystay ayaa ah 22-jir ciidamada booliiska kamid ahaa kasoo ka shaqeynayay gudaha caasimada Turkiga ee Ankara, sida uu sheegay duqa Ankara.
Kadib markii uu toogtay safiirka, ninka weerarka geystay ayaa soo istaagay meeshii uu ka khudbadaynayay safiirku, sida laga arkay muuqaal ay saxaafadu baahisay.
Sawirka waxaa ka muuqda ninka toogashada geystay oo dul taagan meydka safiirka. [Sawirka: Twitter]
Ninka toogashada geystay ayaa ka hadlay xaalada magaalada Aleppo ee dalka Suuriya, kadib markii uu falka geystay.
“Waxaanu ku dhimanay Aleppo, adiguna halkaan baa ku dhimanaysaa.” ayuu yiri ninka toogtay safiirkii Ruushka u fadhiyay gudaha Turkiga.
Wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu ayaa ku warantay in ciidamada ammaanka ay toogteen ninka weerarka geystay kadib markii uu dagaalamay.
Dilka ayaa imaanaya maalin kahor shir ay wasiiradda arrimaha dibada Turkiga, Ruushka iyo Iran ku yeelan lahaayeen magaalada Moscow si ay uga wada-hadlaan arrimaha Suuriya.
October 31, 2016 Turkiga oo shaqada ka cayriyay 10,000 shaqaale dowli ah, xirayna xarumo warbaahineed
February 5, 2017 Ciidamada booliiska Turkiga oo xiray boqolaal looga shaki qabo ururka Daacish kadib howlgalo ay ka sameeyeen dalka oo dhan
January 31, 2017 Ugu yaraan labo qof oo ku dhimatay weerar is-qarxin ah oo maleeshiyada Xuutiyiinta ay la beegsadeen markab dagaal oo Sucuudigu lahaa
Puntland’s marine police forces kill at least four ISIS fighters, destroy base near Qandala